आज ३२३ जनालाई कोरोना, नेपालमा सँक्रमित ३२३५ पुगे | Beauty News Nepal
By Beauty News Nepal	 On Jun 6, 2020
काठमाडौं २४ जेठ
नेपालमा आज ३२३ जनालाई कोरोना सँक्रमण पुष्टी भएको छ । जसमा २८६ पुरुष र ३७ जना महिला रहेका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा ३२३ जना सँक्रमित थपिएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकाश देवकोटाका अनुसार आज ३२३ जनामा कोरोना सँक्रमण हुँदा नेपालमा कुल सँक्रमितको सँख्या ३ हजार २३५ पुगेको छ ।
मृतक १३ जना पुगेको छ । मृत्यु भएका थप २ जनामा कोरोना सँक्रमण पुष्टी भएसँगै मृतक १३ जना पुगेका छन् । २१ जेठमा निधन भएका डोल्पाका एक पुरुषमा आज कोरोना पुष्टी भएको हो । कैलाली, धनगढीको एक महिलाको निधन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौलाको उपचारको क्रममा हिजो दिउँसो मृत्यु भएको थियो । उनको पनि कोरोना सँक्रमण पुष्टी भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंका चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरू ३१ र ३५ वर्षीया महिला र ३६ र ४६ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा १७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्याङ्जामा १०, कास्की र नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व ३–३ जना तथा बागलुङमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । कपिलवस्तुमा ५० जना संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरूमध्ये ३९ जना महाराजगञ्ज नगरपालिकाका छन् । संक्रमित हुनेमा ६ महिनाकी बालिका र ४ वर्षका बालक पनि छन् । यस्तै, भक्तपुर कमल विनायककी ३१ वर्षीया महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
नवलपरासीका दुई जना, रुपन्देहीमा ३ जना र अर्घाखाँचीमा एक जनाको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा थप ९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरूमध्ये ४७ जना दैलेखका छन् । महाबु गाउँपालिकाका ४३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । संक्रमित हुनेमा ५ र १८ महिनाका शिशु समेत छन् । यस्तै ४ जना दुल्लुका हुन् ।
यस्तै, सुर्खेतका नौ जना, जाजरकोटका चार जना र डोल्पाका एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरूमध्ये ६ जना बझाङको खप्तडाछान्ना गाउँपालिका–३ को क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू छन् । यस्तै, कञ्चनपुर महाकालीका ३८ वर्षीय पुरुष, काठमाडौं घर भई कञ्चनपुरमा रहेका १८ र ३८ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
डा. देवकोटाका अनुसार नेपालका आज १ लाख ६८ हजार ३१ जना क्वारेन्टाईनमा रहेका छन् । यस्तै आज २८५७ जना कोरोना उपचारको क्रममा आईसोलेसनमा रहेको पनि डा. देवकोटाले बताएका छन् ।
यस्तै आज ३६५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । जसमा २९९ जना पुरुष र ६६ जना महिला रहेका छन् । आज मात्र ३२ जना घर फर्किएका छन् ।
जसमा जनकपुर अस्पतालका १५ जना, शुशिल कोईराला क्यान्सर अस्पताल बाँकेबाट ४ जना, सेती अस्पतालबाट ६ जना, सुर्खेत अस्पतालबाट ७ जना गरी आज ३२ जना डिस्चार्ज भएका हुन् ।
आनन्दले उद्घाटन गरे सिम्प्ली द वेस्ट रेष्टुरेन्ट वीथ लाईभ म्युजिक
जसिता र प्रदीपको जोडी लभ स्टेशनमा